အသက် ၂၅ - ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းသည်ယောက်ျားလေးကိုသတ်။ လူတစ်ယောက်မွေးဖွားရန်ဖြစ်သည်။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
အသက် ၂၅ - ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းသည်ယောက်ျားလေးကိုသတ်။ လူတစ်ယောက်မွေးဖွားရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် ၂၅ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤနေရာတွင်အကောင့်တစ်ခုတောင်မဖန်တီးခဲ့ဖူးပါ။ ums ည့်သည်အဖြစ်ဖိုရမ်များနှင့်အခြားအရာများကိုလိုက်နာလေ့ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီ site ကကျွန်တော့်ကို ၂ နှစ် ၂ နှစ်ကြာတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုမကြည့်၊ ဒီနှစ်တွေမှာငါလိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါကြောင့်သန္ဓေတည်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။
အသက် ၁၇ နှစ်မှာအထက်တန်းကျောင်းတက်တုန်းကကျွန်မရဲ့စွဲလမ်းမှုကစတင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်မှာချိုမြိန်တဲ့၊ ငါသူမအတွက် SIMP ပဲ။ သူကငါ့အတန်းဖော်သူငယ်ချင်းအရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ငါ့ကိုလှည့်စားခဲ့တယ် ပြီးတော့သူ့ကိုတွေ့တော့သူနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တော့သူကရှက်တယ်၊ မကြောက်ဘူး၊ သူက“ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူမကငါ့ရဲ့ D ကိုပိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်။ ” ငါအရမ်းစိတ်ဆိုးပြီးဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာအတွင်းထဲအော်ဟစ်နေရုံသက်သက်ပဲ။ ကောင်းပြီငါထိုအချိန်တိုင်အောင်သူမနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွခဲ့ပေမယ့်ထို့နောက်သူမကြောင့် shithead ရိုက်နှက်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမကငါနှင့်အတူလိင်မဆက်ဆံခဲ့ပေ။ ကောင်းပြီငါ porn ကြည့်တစ်နေ့လုံးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေစတင်ခဲ့သည်။ ငါပင်ငါဘာကြောင့်မသိ dont သူမ၏နှင့်အတူတက်မချိုးခဲ့ပါဘူး။ ငါရုံ (ကဘယ်လောက်သနားစရာကိုငါသိ၏) သွားခဲ့သည်လမ်းကိုဆက်လက်။ ယခုငါ SIMP နှင့် Cuck ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်အဆင့်က B ကနေ C အထိကျသွားပြီးကျွန်တော့်ရဲ့တုန်ခါမှုကအရမ်းမှိန်တယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းကိုပြောခဲ့တယ်၊ ရေကန်ထဲမှာငါးတွေများတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိန်းကလေးတစ်ယောက်မတွေ့ခဲ့ရဘူး။ တစ်နေ့လုံးငါအခန်းထဲမှာထိုင်ပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုလှမ်းထုတ်ခဲ့တယ်။ အချို့သောသာမန်များနှင့် စတင်၍ femds မှ cuckold သို့ bdsm သို့စတင်ခဲ့သည် ငါ cuckold porn yuck နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယနှစ်ကောလိပ်တွင်ကျွန်ုပ်ပြောင်းလဲရမည်ကိုသိသည်။ ငါလုံးဝလိင်ဆက်ဆံမှု၊ လူမှုရေးဘ ၀ မရှိခဲ့ဘူး။ ငါနှင့်အတူအတန်းတစ်ခုမျှဝေခဲ့သောကောင်လေး မှလွဲ၍ ငါ့အတန်းထဲတွင်မည်သူ့ကိုမျှမသိခဲ့ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်နေတဲ့အချိန်မှာငါ nofap site ကိုလဲတွေ့မိတယ်။ ၉ လလိုကြိုးစားပြီးပျက်ကွက်ပြီးတဲ့နောက်ငါရက်ပေါင်း ၉၀ လောက်ပြေးရတယ်။ ငါပျော်တယ်၊ နယ်နိမိတ်တွေမရှိဘူး ငါမူးတယ်၊ နောက်တဖန် cuck porn နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည် ။ ဒါပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါပျက်ကွက်ပြီးနောက်နောက်တဖန်ထနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရက်ပေါင်း 60 Streak တယ်။ ငါသူငယ်ချင်းတစ် ဦး နှင့်အတူပါတီတစ်ခုသို့သွားခဲ့သည် (လမ်းအသစ်ဖွင့်စဉ်အတွင်းလုပ်သောမိတ်ဆွေအသစ်များ)၊ ကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ချိတ်ဆက်မိသည်သို့မဟုတ်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ငါနင့်ကိုမေ့လို့မရခဲ့ဘူး။ ဒါကငါလိုချင်တာပဲ” ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ပြီးရှက်ရွံ့စွာနဲ့ကြည့်ရင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးစိတ်ရှုပ်သွားတယ်။ ငါ cuck အဖြစ်အချို့သော site ပေါ်တွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကောင့်လုပ်, အကြိမ်ပေါင်းများစွာထားကြ၏ (ဒါဟာရုံအခြေခံအားဖြင့်နောက်တဖန်ပဲ porn ကို fuckin စုံတွဲတစ်တွဲမှ masturbating ခဲ့သည်)
ငါအသက် ၂၂ နှစ်မှာငါအစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီ၊ ငါ့မှာအပြောင်းအလဲရှိရမယ်။ ငါအားကစားခန်းမမှာ ၀ င်ခဲ့တယ်။ (ငါကပိန်ပိန်တယ်) ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ အစ္စလာမ်နှင့်ဟိန္ဒူဘာသာတို့၏ကိုးကားချက်များနှင့်ကျမ်းချက်များကိုစဖတ်သည်။ ထိုအခါ nofap နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ ကောလိပ်မှာစိတ်ဖိစီးမှုများတာကြောင့်ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် porn စားသုံးမှုသည်နိမ့်ကျနေပြီဖြစ်သည်။
အပတ် ၁ - ငါအားကစားရုံကနေအနာတရဖြစ်ခဲ့ပြီးစာရွက်တွေအများကြီးရခဲ့တယ်။
အပတ် ၂။ အားကစားခန်းမကိုမသွားခဲ့ဘူး၊
လ ၁: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်တန်းဆရာတစ်ယောက်ရလာသည်။ ထိုသို့စာမေးပွဲအချိန်ပဲ! ငါအအေးမိရေပန်းယူပြီးစတင်ခဲ့သည်။ ငါသင်တန်းနည်းပြကို nofap အကြောင်းပြောပြီးသူကကျောင်းဟောင်းဖြစ်နေပြီ! သူကလူတွေကိုအားကစားရုံလုပ်ရင်သူဟာအသက် ၃၀ ၀ န်းကျင်လောက်ရှိရင် nofap မှာဖြစ်ဖို့အားပေးခဲ့တယ်။ ရက်အတော်များများမှာတိုက်တွန်းမှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံရပေမယ့်ငါမရွေ့ပါဘူး။
လ 6: ငါတစ်နည်းနည်းနဲ့လ6ရတယ်သူကပြောတယ်! ငါ့မှာလိင် drive (သို့) စိုက်ထူမှု0ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါစိတ်မပူခဲ့ဘူး။ အားကစားခန်းမမှာလေးနက်တဲ့အကျိုးအမြတ်တွေရခဲ့တယ်။ ငါ၏အစာမေးပွဲတွင်, si တော်တော်ကောင်းသောအဆင့်ကိုရတယ်။
ပထမနှစ် - ဒီအောင်မြင်မှုအတွက်ကျွန်တော်အရမ်းပျော်ခဲ့တယ်။ ငါ cuck မရှိတော့ဘူး။ အဲဒီ cuck fantasies တွေကကျွန်တော့်ကိုရွံရှာတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်စိတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဆီကိုသွားခဲ့တယ်။ သူကငါ့ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့်အထက်တန်းကျောင်းကအဖြစ်အပျက်ကိုလက်ခံစေခဲ့တယ်…သူတို့အား bastard xD ခွင့်လွှတ်ပါ။
ငါလူမှုရေးဖြစ်လာတယ်, အားကစားခန်းမထဲမှာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့စတင်, ကောလိပ်အတွက်မိတ်ဆွေဖွဲ့ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏အကျိုးအမြတ်များနှင့် nofap များကြောင့်မိန်းကလေးများနှင့်လည်းလူကြိုက်များခဲ့သည်။
အချိန်ငါသွား2နှစ်ငါ့အ Streak တယ်သွားလေ၏! porn ကိုဘယ်တော့မှမကြည့်၊
၃။ Testosterone ဟော်မုန်းတိုးတယ်။
၆။ သင်သာပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံပြီး nofap ကောင်းမွန်သောလိင်ဆက်ဆံမှုရှိပါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် porn သည်အဓိပ္ပာယ်မရှိဟုထင်ရသည်။
၈။ အမျိုးသမီးများအပေါ်မြို့တော်ကိုသွားသောအခါကျွန်ုပ်သည်ယခုအချိန်တွင်ရောက်ရှိနေသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအခုပဲလွှမ်းမိုးထားပြီဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်။
၉။ လူတွေကိုကြင်နာမှုနဲ့ထောက်ထားစာနာမှု (ငါဘာတွေကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတာကိုငါသိတယ်။ လူများစွာကိုဘာမှမသိဘဲတရားစီရင်ခြင်းပဲဆိုတာငါသိတယ်)
ထိုမျှမကများစွာ! ကျွန်ုပ်၏မကောင်းသောအင်္ဂလိပ်အတွက်လည်းခွင့်လွှတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏မိခင်ဘာသာစကားမဟုတ်ပါ။
ကျေးဇူးပြုပြီး Nofap beacuse ကိုဆက်လုပ်ပါ ဦး ။ ငါသည်သင်တို့ကိုယောက်ျားဤနည်းလမ်းဖြစ်၏ပြောပြနေပါတယ် !! ဒါကကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုသတ်ဖို့နဲ့လူတစ်ယောက်မွေးဖွားဖို့ပါ။
LINK - 730+ ရက်အဘယ်သူမျှမ pm တွင် !!!!!!!